Paikadin'ny horonantsary: ​​Antony 5 hananana iray
Talata, Jolay 7, 2020 Asabotsy 27 Febroary 2021 Douglas Karr
Tamin'ity volana ity dia nandany fotoana kely aho hanadiovana ny ahy Fantsona Youtube ary koa matotra amin'ny famokarana horonan-tsary bebe kokoa hiaraka amin'ny lahatsoratro. Tsy misy isalasalana ny amin'ny herin'ny horonantsary - na mivantana na an-tsoratra - amin'ny fanatontosana ireo vina sy mpanjifa.
99% amin'ny orinasa ilay horonan-tsary nampiasaina tamin'ny taon-dasa dia nilaza fa mikasa ny hitohy izy ireo… ka mazava ho azy ireo fa mahita ny tombony azony!
Trends Marketing amin'ny Video
Ny fanjifana horonantsary koa dia nirongatra tamin'ny fampiasana finday tato ho ato. Ny fantsom-pifandraisana tsy voafetra sy ny fitaovana avo lenta dia nahatonga ny fijerena horonantsary ho mahafinaritra amin'ny efijery kely… Ny dokam-barotra amin'ny horonan-tsary, ary koa ny horonan-tsary mifandraika amin'ny orinasa, dia nitazana betsaka kokoa noho ny teo aloha.
Ity misy tsara horonantsary mpanazava izay navoakanay taona maro lasa izay miresaka ny tombotsoan'ny video:
Ireto misy antony 5 tokony hampidirina anaty horonan-tsarimihetsika amin'ny varotra sy varotra amin'ny Internet:
Exposure - mitohy ny paikadin'ny votoaty horonantsary dia mikarokaroka sy mizara. Miseho izao ny horonantsary 70% amin'ireo lisitra valin'ny fikarohana 100 voalohany. Ary ny Youtube dia manohy ny tranokalan'ny # 2 be mpitady indrindra any Etazonia… ny fanontaniana dia hoe eo amin'ny valin'ny fikarohana horonantsary ve ny orinasanao sa misy ny lahatsarin'ireo mpifaninana aminao?
Fanaterana vaovao amin'ny fomba hafa - mamela ny toetrany ny horonan-tsary ary ny fahaizana manazava olana sarotra. Na horonantsary manazava toa ilay etsy ambony io na fijoroana ho vavolom-po ho an'ny mpanjifa… fampitana fampahalalana mahomby hampandehanana ny tena fifamofoana ny horonan-tsary.
Ampitomboy ny fivadihan'ny varotra - Ny horonan-tsary amin'ny pejin'ny vokatra sy ny pejy fitobiana dia mitondra ny tahan'ny fiovam-po. Raha ny marina, araka ny fianarana iray, ny fampiasana horonan-tsary ao amin'ny pejy fiantsonana dia afaka mampitombo ny fiovam-po amin'ny 86%. Amazon, Dell, ary ireo mpivarotra an-tserasera hafa dia nizara antontan'isa fa ny horonan-tsary navoaka dia afaka mampitombo ny fihoaran'ny olona mividy hatramin'ny 35% amin'ny ecommerce.
Ahenao ny fahafoizan-tena ary mampitombo ny fotoana onenana - raha efa vonona ny 28% -n'ny teny amin'ny pejy iray alohan'ny handaozany ny olona iray, ny horonan-tsary dia mety hahasarika olona lava kokoa.
Firaisana marika - Ny fametrahana atiny misy ifandraisany, mahaliana na mampiala voly ho hitan'ny olona dia afaka manampy amin'ny fanatrarana olona vaovao na hanova hevitra momba ny marikao. Manome fotoana ahafahana mampifandray ara-pihetseham-po amin'ny mpihaino anao ny horonantsary.
famoronana horonan-tsary mahomby Tsy tsotra araka ny feony, na izany aza. Na dia lasa mora ampiasaina aza ny rindrambaiko fikirakirana sy fanovana, dia masiaka ny fifaninanana hahazo hevitra. Youtube sy tranokala fampiantranoana horonantsary hafa dia manome angon-drakitra mpijery be dia be izay afaka manome anao fahitana kely momba izay mijery ny horonan-tsarinao sy ny fomba ifandraisan'izy ireo… ampiasao!
Aza hadino ny mihaino ny anay podcast farany teo niaraka tamin'i Owen avy amin'ny The Video Marketing School ho an'ny torohevitra tsara!
Tags: antony videoantony marketing amin'ny horonan-tsaryvideo marketingvideo marketing strategyYouTubeYouTube
Ireo singa fototra hita maso amin'ny famolavolana pejy fitobiana